Kedu ihe bụ okpomọkụ? | Network Meteorology
Kwa afọ enwere ihe dị ka ụbọchị 30 nke nchebe sitere na anyanwụ na-aghọwanye ihe dị mkpa karịa otu nhọrọ. N'oge ahụ, ọnọdụ okpomọkụ dị elu nke na ịchọrọ ịnọ ụbọchị n'ụsọ osimiri ma ọ bụ ịgagharị n'ugwu, n'ezie, na-eweta nchebe anyanwụ mgbe niile, ebe ọ bụ na ọ bụghị na ị nwere ike ịkwụsị ọkụ.
Oge a maara dị ka Ọrịa Canicula, ma malite n’etiti July 15 na August 15. Ma olee ebe aha ahụ si? Gịnịkwa mere o ji bụrụ oge kacha ekpo ọkụ n’afọ?
1 Canicula akụkọ ihe mere eme
2 Ebee ka aha ahụ si?
3 Gini mere oge achicha jiri ju egwu?
4 Okpomoku oku a na ya na otu ekpom oku ahu dika?
5 Otu esi edozi okpomọkụ
Canicula akụkọ ihe mere eme
Kpakpando Sirius (n'aka ekpe).
Ọtụtụ puku afọ gara aga, kpọmkwem 5.300, oge kachasị ewu ewu nke afọ dabara na ịrị elu celiac nke kpakpando Canis Major, yana ịrị elu nke kpakpando Sirius. Mana nke bu eziokwu bu na n’oge obughi nke a. N'ezie, n'ihi ihe dị mkpa nke ụwa, Sirius pụtara dịka kpakpando na-enwu gbaa na mbido Septemba, ebe oge kachasị ọkụ malitere na June 21.
Ebee ka aha ahụ si?
Okwu a sitere na ike o ụgbọ mmiri na Latin ọ pụtara 'nkịta'. Ọ na-ezo aka na ìgwè kpakpando Canis Major, ebe ọ bụ na kpakpando Sirius (nke a makwaara dị ka "The Scorcher" bụ nke na-enwu gbaa na mbara igwe n'abalị n'oge oge kachasị ekpo ọkụ na Northern Hemisphere. Ọbụna okwu a "ụbọchị nkịta gara aga" nwere ike ịbụ okwu a.
Gini mere oge achicha jiri ju egwu?
Anyị nwere ike iche na oge kachasị ọkụ n’afọ na-amalite na June 21 na Northern Hemisphere na Disemba 21 na Southern Hemisphere, na oge okpomọkụ solstice, mana nke bụ eziokwu bụ na ọ bụghị. N'ihi gịnị? Site na ihe dị iche iche: ọchịchọ na ntụgharị nke ụwa mbara igwe nke onwe ya, radieshon nke anyanwụ na mmetụta nke oke osimiri.
Wa, dịka anyị si mara, na mgbakwunye na ịgbanye onwe ya, na-agbatịkwa ntakịrị. Oge anwụ na-achasi ike, ụzarị anyanwụ na-erute anyị n’esepụghị aka, ọ ka doo anya, ma oké osimiri ka na-ekpo ọkụ; Ọzọkwa, ụwa ka malitere ịmịkọrọ nnọọ nnọọ okpomọkụ. Maka nke a, izu ole na ole ị nwere ike ịnọ nke ọma n'èzí, ebe ọ bụ na oké osimiri na-enye ume ikuku. Ma nke a anaghị adịte aka. Ka ọ na-erule Julaị 15 ma ọ bụ karịa, mmiri nke oké osimiri agwakọtala ọkụ ruo ụbọchị 30 nke oke okpomoku.
Na mpaghara ebe ihu igwe dị na kọntinent, a naghị akpọpụta mmetụta ahụ, ya mere okpomọkụ kachasị dị elu na-ebili na mbụ. N'ụzọ megidere nke ahụ, n'ebe ndị nwere ihu igwe dị jụụ, ọkachasị n'akụkụ ndị dị n'ụsọ oké osimiri, a na-enwe mmetụta nke ọma.
Okpomoku oku a na ya na otu ekpom oku ahu dika?
N'ịbụ oge kachasị ewu ewu, anyị nwere ike ịkpọ ya oke ọkụ ... mana nke a agaghị abụ nke zuru oke. Okpomọkụ na-ezo aka ụbọchị 30 mgbe anyanwụ dị ike karị, mana ebili mmiri bụ ihe omimi nke ihu igwe nke ihe ndị a bụ:
Okpomoku kacha elu na nke kachasi karịa gafere eleverars edepụtara na mpaghara maka ụbọchị ahụ. Ọ ga-adabere na mpaghara ahụ ma a na-ewere ọnọdụ okpomọkụ dị ka "nkịtị" ma ọ bụ "pụrụ iche". Dịka ọmụmaatụ, na obodo ndị dị ka Córdoba uru nke 37ºC na August ka a na-ahụta dị ka ihe nkịtị, mana na Valladolid mmadụ nwere ike ikwu maka oke ọkụ.
Oge ọ dịkarịa ala ụbọchị 4. Ọnọdụ okpomọkụ ga-adị elu karịa nkezi maka ụbọchị ole na ole, n'ihi na n'otu ụbọchị ahụ mmadụ anaghị achọpụta mmetụta nke okpomọkụ; N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na ọ bụ ihe na-adịgide adịgide, ụlọ, asphalt, ihe niile na-ekpo oke ọkụ, na-eme ka anyị gbanwee usoro anyị ma ọ bụ omume anyị ruo mgbe ọ gafere.
Ebili mmiri na-emetụta ọtụtụ mpaghara, ma ọ dịkarịa ala. Mgbe edere oke okpomọkụ dị ukwuu n'otu obodo, ekwughị na ebili ọkụ emeela ebe ahụ, n'ihi na ka nke ahụ wee mee, ọ gaara emetụta obodo na obodo ndị ọzọ. Ebili mmiri 2003 siri ike kpọm kwem n'ihi oke ọ nwere, ebe ọ bụ na ọ metụtara ihe niile nọ na Europe. Dịka ọmụmaatụ, na Denia, na August 2 ha nwere 47,8ºC.
O di nwute, ihe omume ndia nwere ike bute onwu ndi mmadu ndị na-esighị ike karị, dị ka ụmụaka ma ọ bụ ndị agadi. Dịka ọmụmaatụ, na-esote ebili 2003, ngụkọta nke ndị mmadụ 14.802 nwụrụ na kọntinent ahụ, nke nọchiri anya 55% karịa.
Ya mere, oge ngosi ọkụ na-apụta n'oge a maara dị ka okpomọkụ, mana ha anaghị eme kwa afọ (ndị a na-adịwanye ụkọ, n'ihi okpomoku ụwa).
Otu esi edozi okpomọkụ
Igwe dị elu, karịchaa mgbe ha gafere 30ºC, ga-amanye anyị ịme ụfọdụ iji nwee ike ịga n'ihu na ụbọchị anyị taa. Zọ kachasị mma iji die ya bụ na-a aụ nnukwu mmiri (opekempe 2l / ụbọchị), rie nri, nri ohuru (dika salads na nkpuru dika ima atu), na mee ka ụlọ na ebe ọrụ nwee ume.
Nụla banyere igwe na-ekpo ọkụ?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Climatology » Okpomọkụ
«Anyị nwere ike iche na oge kachasị sie ike nke afọ ga - amalite na June 21 (…)«: na - eche banyere ya, anyị nwere ike iche na ụbọchị kachasị mma bụ June 21, ebe ọ bụ ụbọchị kachasị ogologo, ma site n’ebe ahụ na - agbada na okpomọkụ ịbụ ụbọchị kacha nso. Ọ bụ ezie na dịka ị kọwara, nke a abụghị otu. Otu ihe a na-eme na Disemba 21, n'agbanyeghị na ọ bụ ụbọchị nwere obere anwụ (na mgbago ugwu), bụ mgbe oge oyi bidoro na ọ naghị adịkarị oyi dịka na Jenụwarị, mgbe ụbọchị na-adị ogologo.
Gịnị bụ terral?